Barcelona Oo 6 Jir Brazil Ah Lasoo Wareegtay Iyo Maicon Oo Chelsea Ku Biiri Raba.
Lix jirka reer Braziil ayaa lagu magacaaba Artur Miani waxana uu bilaabay tababarka kooxda Barcelona isagoo lagu daray liiska ku tababar qaadanaya xerada La Masia ee ah tan ay Barcelona ku tababartaan.
“Tani waa arrin wanaagsan wuxuuna la ciyaaray caruur da’diisa ah ayuu yiri Artur Aabihiis oo lagu magacaabo Adilson Miani oo u waramayay Globoesporte.
Wuxuu intaa ku daray Aabaha dhalay lix jir Artur Miani inuu ku faraxsan yahay in wiilkiisa uu hishiis la galo Barcelona oo kamid ah naadiyada ugu wanaagsan caalamka.
Aniga kama tagaayo halkan hooyadiisana waa ay imaanaysaa magaalada Barcelona si aan ula socono wiilkeena lix jirka ah ayuu inta raaciyay Artur Miani aabihiisa.
Kooxda Chelsea oo 10 milyan usoo bandhigtay Maicon.
Naadiga Chelsea ee dalka ingiriska ayaa waxaa ay ku dagaalamaysaa daafaca kooxda Inter Douglas Maicon.
Xidiga caalamiga wadanka Braziil Douglas Maicon ayaa wakiilkiisa wuxuu xaqiijiyay in xidigaas ay Chelsea doonayso isla markaasna mushaaradiisa ay u kordhinayso.
Wararka ayaa sheegaya in Chelsea ay dagaal adag u galayso inay xidigaas soo iibsato.
Lix jirka reer Braziil ayaa lagu magacaaba Artur Miani waxana uu bilaabay tababarka kooxda Barcelona isagoo lagu daray liiska ku tababar qaadanaya xerada La Masia ee ah tan ay Barcelona ku tababartaan.“Tani waa arrin wanaagsan wuxuuna la ciyaaray caruur da’diisa ah ayuu yiri Artur Aabihiis oo lagu magacaabo Adilson Miani oo u waramayay Globoesporte.Wuxuu intaa ku daray Aabaha dhalay lix jir Artur Miani inuu ku faraxsan yahay in wiilkiisa uu hishiis la galo Barcelona oo kamid ah naadiyada ugu wanaagsan caalamka.Aniga kama tagaayo halkan hooyadiisana waa ay imaanaysaa magaalada Barcelona si aan ula socono wiilkeena lix jirka ah ayuu inta raaciyay Artur Miani aabihiisa.
Kooxda Chelsea oo 10 milyan usoo bandhigtay Maicon. Naadiga Chelsea ee dalka ingiriska ayaa waxaa ay ku dagaalamaysaa daafaca kooxda Inter Douglas Maicon.Xidiga caalamiga wadanka Braziil Douglas Maicon ayaa wakiilkiisa wuxuu xaqiijiyay in xidigaas ay Chelsea doonayso isla markaasna mushaaradiisa ay u kordhinayso.Wararka ayaa sheegaya in Chelsea ay dagaal adag u galayso inay xidigaas soo iibsato.